हिरासतमा कृष्णबहादुर महरा को सँग छन् ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
हिरासतमा कृष्णबहादुर महरा को सँग छन् ?
मुलुकभर दशैंको रौनक छाएका बेला निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रहरीको हिरासतमा पुगे । बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरेर उनलाई सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तको हिरासतमा राखिएको छ । सिंहदरबार वृत्तमा दुई वटा हिरासत कक्ष छन् । एउटा कक्षमा पुरुष र अर्कोमा महिलाहरुलाई राखिन्छ ।
महरा पुरुष हिरासत कक्षमा अन्य अभियुक्तसँगै बसिरहेका छन् । सो कक्षमा लागूऔषध कारोवारी र ठगीका अभियुक्तहरुसँगै उनलाई राखिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरले जनाएको छ । हिरासतको सुरक्षार्थ खटिएका अधिकृतहरुका अनुसार महरा उदास र मौन देखिएका छ । सोमबार दिउँसो हिरासत कक्षको सीसी टीभीमा हेर्दा उनी सुतिरहेका थिए ।
अधिकृतहरुका अनुसार उनले केही बेर पुस्तक पनि पढे । उनलाई प्रहरी अधिकृतका लागि बनाइएको खाना दिइएको छ । वीर अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘ब्लड प्रेसर हाइ’ देखिएपछि उनलाई नुन र अमिलो कम हालेको खान पहिल्यै झिकिन्छ । स्वास्थ्यमा समस्या नआओस् भनेर एक जना चिकित्सक पनि तैनाथ राखिएको छ ।
श्वासप्रश्वासमा असहज हुन सक्ने भएकाले अक्सिजन पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । लामखुट्टेको समस्या नहोस् भनेर धुपको पनि व्यवस्था गरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । स्वास्थ्यका कारण उनलाई छुट्टै कोठामा एक्लै राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । दशैंका कारण देशभरका प्रहरी कार्यालय सुनसान भएका बेला महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा भने
बाक्लो चहलपहल छ । नहोस् पनि किन ? बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि मुलुकको चौथो वरियताको सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका महरा यहाँ कैद छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले आइतबार दिउँसो पक्राउ गर्न अनुमति दिएपछि साँझ बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै काठमाडौं प्रहरी परिसर र महागनरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले महरालाई परिवारलाई मात्र भेट्न खुला गरेको छ । उनलाई भेट्न खोज्दै शुभचिन्तक बाक्लै आइरहेका छन् । अधिकांश उदास भएर फर्कन्छन् । ‘उहाँ आफैंले पनि कोहीसँग पनि बोल्न त्यति रुचि देखाउनु भएको छैन’, एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘परिवारका सदस्य चाहिँ वेलावेला खाना लिएर उनलाई भेट्न जान्छन् ।’